SingForYou.net - Byaw
Tags : ရှင်ပြုအလှူပွဲသီချင်းပါ
By : greenlay on Mar 4, 2010
Score: 161 Rating: 4.88 Comments: 48
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ .. စည်ဗျောသံ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ရှင်ပြုအလှူပွဲတွေမှာ ဒီသီချင်းလေးကို အမြဲကြားရပါတယ်။ အလှူပွဲမှာကျွေးတဲ့ ငါးခြောက်ထောင်း ၊ ဆူးပုတ်နဲ့ ပဲကြီးဟင်းချို ၊ သရက်ချဉ်သုတ်၊ ငါးပိကျော်နဲ့ ပဲတီချဉ်တို့စရာတွေကို အရမ်းသတိရမိပါတယ်။ နားဆင် အားပေးသော ... သူငယ်ချင်း မောင်နှမများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
soramoe on May 16, 2010 0
Myanma yin kyay mhu phaw saung tae di thi chin lay koakaung sone phyi aung so htar tar ~ a..yann arr kya mi par tal
အလွန်နားဝင်ချိုပါ၏အမရေ။ဇော်ခိုင် & လုံးပု****************}
lovercreater on Apr 14, 2010 0
အစ်မရေ အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစ်မအသံနဲ့ သီချင်းနဲ့လိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
greenlay on Apr 14, 2010 0
အားပေးနားဆင်သွားတဲ့အတွက် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်လေး။
joeyouke on Mar 23, 2010 0
mama sain yae...yan taw tal ma gyi yae.....5* pe nor jit mama......
greenlay on Mar 24, 2010 0
အားပေးနားဆင်သွားတာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ တယ် ညီမလေးရေ :)
aungtun1 on Mar 14, 2010 0
Classical song lay tay koayann kyite pii, so tar lalayannn taw dat, Sister greenlay yay,,,,,sis's song lay ko, lite shar pi.... arr pay listen thwer par tal,,,,,nar htung lotayann kaung par tal,,,sister'sdsong lay ko listen pii,,,nge nge tone ka ,Kabyar lay ko ta di ya mi par tal*************************
greenlay on Mar 15, 2010 0
မောင်လေးရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်း စိမ်း..တကယ် ရွာကို လွမ်းမိတယ်..ဆောင်းနှင်းတွေ နဲ့ မနက် စောစော နိူးလာချိန် ဒီသီချင်း ကို ကြားရတတ်တဲ့ ငယ်ဘ၀လေးကို ပြန်လည်သတိရမိတယ်...အော် ကြာခဲ့ပြီပေါ့လေ....ဝေးရပ်မြေ နဲ့ဝေးနေတာ
greenlay on Mar 8, 2010 0
သူငယ်ချင်းရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
thetnyein on Mar 7, 2010 0
မစိမ်းရေ....ကျွန်တော်တို့.မောင်နှမတွေက... အကြိုက်တူတယ်နော်..မမရေ................... အော်...ရွာကိုတောင်လွမ်းပါဘိဗျာ........... :waa :waa
အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ၊ အမစိမ်းနဲ့ အကြိုက်ချင်းတူတာက သီချင်းကိုလား ... အလှူမှာကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေကိုလား :D
ma sain yay ......dlo song ko ma sain always paing paing naing so naing tal.... taw lite tar.... it's indeed so difficult to sing .... always nice *************
greenlay on Mar 7, 2010 0
sis ရေ ... အခုလို နားဆင်အားပေးသွားတာ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
myobala on Mar 5, 2010 0
မမစိမ်းရေ....အလုပ်များနေလို့ အားပေးတာနောက်ကျ သွားတာ ဆောရီးပါနော်......ဗျောခေါက်ပြီးအလှူလုပ်တယ်ဆိုတော့ သမီးလေးကို နားသ သားလေးကိုရှင်ပြု....ချစ်ကိုကြီးကိုတော့ပဉ္ဖင်းတက်ပေးပြီး.....မမစိမ်းက သီလရှင် အပြီးတော့ မ၀တ်လိုက်ပါနဲ့နော်.....ကျွန်တော့်ကို စ မယ့်လူ မရှိမှာစိုးလို့....ဟဟဟဟ...မမစိမ်းရေ...ဦးစိန်မြင့်ကြီးရဲ့ အဖေတခု သားတခု ကို သတိရမိပါရဲ့...အရမ်းနားထောင်ကောင်းတယ်....
greenlay on Mar 5, 2010 0
ကျေးဇူးပါ မောင်မျိုးကြီးရေ ၊ ဒါပေါ့ကွယ် ... ချစ်ကိုကြီးကို ပဉ္ဖင်းတက် ၊ သားကြီးကို ရှင်ပြု ၊ သမီးငယ်ကို နားသလို့ သာသနာ့အမွေခံရတာပေါ့ကွယ် ... မောင်မျိုးလည်း လာမဲ့သီတင်းကျွတ်အမှီကြိုးစားထားနော် :-)
kthetkawmu on Mar 5, 2010 0
ayann kg tal sis...... ayann kyiuk tal********
ကျေးဇူး ... ကျေးဇူးပါ sis ရေ ... :-)
KoBurma on Mar 5, 2010 0
...............................................................................____................................ ............................................................................#####.............................. .........................................................................##........##......#####.......... ..........................................................................##..................####............ .............................................................................#####........###.............. ........##..........##...#####.........##...........##...........##.........###.............. ......##............####..........##..##...............##.............##......##................ .....##.............##...............##..##..............##...............##......................... ......##.........##................##......##.........##.##........##.........###............. ........#####..............###..............####..........####.............###.............. ..........-----..................---....................----..............----.................................... အရမ်းမိုက်ဒယ် ... အရမ်းအရမ်း တော်ဒယ် ..... အရမ်း နားထောင်လို့... အလွန်ကောင်း ... အရမ်းကောင်း ... ၅စတားစ် .... :P:):D
အာတာလွတ်မြို့စားကြီးက ကိုယ်ပိုင်စောင်းတော်ကြီးကိုတကားကားပိုက်ပြီး .... အားပေးနားဆင်သွားတာကတော့ .... " ဟယ် " တဲ့ .... အခုလို အားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ရှိပါတယ်ရှင် .... :-)
thant on Mar 5, 2010 0
Ma Sane yay......myaw nay tar kyar hla pop......akhu mha bae narr htaung ya tal.......kg lite tae aso......des..ko read pye thwar yay tway taung kya tal......**************** tway pay thwar tal naw........,
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ... မသန့်ရေ ။
romeo on Mar 5, 2010 0
ma seain yet Description ko kyi p dot thwar yay tg kya lar p byar....hehehe...
bro က ဘယ်တွေပျောက်နေတုန်း ... သီချင်းဆိုပါအုန်း အားပေးဖို့စောင့်နေမယ် ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ် ။
moeluu on Mar 5, 2010 0
Nice classical!.. ma)green, knowing that it's really hard to sing.. but you handle it here so well.. bravo.!!*
မစိမ်းသီချင်းတွေကို အားပေးတဲ့ bro ရေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
koaungkhaing on Mar 5, 2010 0
you are so talented to sing such difficult song. I am still listening it to sing. Not yet successful.
အခုလို အားပေးတာကို ကျေးဇူးပါ အကိုကြီးရေ။ တန်ခူးလရောက်ရင် ... ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ သားရှင်ပြု သမီးနားသ , သာသနာ့အမွေခံ ... စည်သံ ဗျောသံ ညံမဆဲ ကျင်းပကြတဲ့ အလှူပွဲတွေကို သတိရလွန်းလို့ ဆိုလိုက်တာပါ ... အသံကတော့ မကောင်းပါဘူး။
brownlay on Mar 5, 2010 0
ma sain doet taw chet ka tot pyaw sa yar ko ma lo dot par buu... ayann taw ayann kg par bel ma sain yay..dlo shar shar par par song lay tway ko hma yway p paing naing swar so hnaing thaw ma sain atwet *********************!
ညိုလေးရေ ... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သီချင်းကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကြိုးစားပြီးသီဆိုးတာပါ ။
susannyunn on Mar 5, 2010 0
a yan ko kyat ta yay mingalaraphyar phyar nelz pyay. sone te song lay ta poat ko khan sar nar sin thwar par te chint.....mama sein yay... bravoooooooooooooooo....:clap :clap ;clap.......:)))))))0 million starz par chint..>>>>>>>
လာရောက်အားပေးသွားတဲ့ ချစ်ညလေးရေ ... အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
lalaynge on Mar 5, 2010 0
မမစိမ်းရေ ရွာအလှုပွဲမှာ အပီတွယ်ခဲ့ပုံကိုပြန်သတိရတယ်ဗျာ ..မမသိမ်းကလဲအဆိုကောင်း လွမ်းကလဲလွမ်းလာပီ..:D
ဟုတ်တယ် bro ရေ ... ပကာသနမပါတဲ့ တော့ဓလေ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အလှူထမင်း ဟင်းတွေကို မစားရတာ ၆နှစ်ရှိပြီလေ ... အရမ်းလည်းသတိရလို့ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
Taw_Thar_Lay on Mar 5, 2010 0
Very good. I would also like to sing this song some time. ***** :-)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ၊ကိုတောသားလေးလည်း ဆိုပါအုံး ... အားပေးဖို့စောင့်မျှော်နေမှာနော် ... ။
hippo on Mar 4, 2010 0
sis greenlay ရေ sis ရဲ့ မြန်မာသံသီချင်းလေးတွေမျှော်နေတာ ခုမှပဲ ပေါ်လာတော့တယ် ... လာမယ့်လာတော့လည်း ဗိုက်ပါဆာလာအောင်လုပ်သွားတယ် ... :))) ဆိုသွားတာအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်ရှင် ... 5*
တွံ့တေးသိန်းတန် ၊ တင်တင်မြ တို့ဆိုထားတဲ့ ဒီသီချင်းကိုလေ ရှင်ပြုအလှူပွဲတွေမှာ အမြဲကြားရလို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အရမ်းလည်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ ၊အခုလို အားပေးတာကို ကျေး ဇူးတင်ပါတယ် sis ရေ ..။
chitmoe2009 on Mar 4, 2010 0
a yan kg par tal shin,,,,,,I love it...5******
အားပေးနားဆင်သွားတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် sis ။
maureen on Mar 4, 2010 0
မမစိမ်းရယ်..ဆိုသွားတာ အရမ်းကောင်းပြီး ကျက်သရေရှိလိုက်တာ...ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုက်ပေမဲ့မဆိုတတ်လို့ မဆိုပေမဲ့ မမအခုလိုဆိုပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..အမြဲအားပေးနားဆင်လျက်...************************ foru...
greenlay on Mar 4, 2010 0
သီချင်းကိုနှစ်သက် , အမဆိုထားတာကိုလည်း အားပေးသွားတဲ့ ညီမလေးရေ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SKB on Mar 4, 2010 0
ကောင်းတယ် အစ်မရေ ဒီလိုသီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရတာ အရမ်း ကြည်နူးတယ်အစ်မရေ ကောင်းမှကောင်းပါ ပဲဗျာ အားပေးသွားတယ် အစ်မရေ
အမလည်း ဒီသီချင်းထဲမှာပါတဲ့ အလှူပွဲကြီးကိုမြင်တွေ့ပြီး ... ကြည်နူးဝမ်းသာလွန်းလို့ သာဓုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိပါတယ်။ အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မောင်လေး။
turikimuriki on Mar 4, 2010 0
di song lay thiet ma so kya thay buu nor ... mama so thwar tarayan ko paing naing pee kg mon hla par tel ...ahlu pwel ko thwar myin lar mi tel ... myanmar pyi ko po lwan lar tel ...ayan kyit tel mama yay ... million stars from me :)))))))))))))))))
မစိမ်းဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကို အမြဲလာရောက်အားပေးတဲ့ ညီမလေး ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
pp01 on Mar 4, 2010 0
:OO de lout lwout kg tar.. bar kg buu lae..wait nay tar kyar pyii..ment chin lwon lot.. ta kal ko aye chan kyat tha yay shi tal.. min ga lar apaung nae pyae sone tal... ma kyar ya tar kyar pyi phyit tae myanmar yoe yar song lay kyar ya tar.. kyi nuu phot kg lite tar..MA SAIN Kwa pyaing san shar..million stars**************************************************************:D
အရင်ဆုံး စတားတွေပေးသွားတဲ့ ပီပီရေ .. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။